Yintoni Inkcazo yeProtestanti?
Iyintoni Intsingiselo yamaProthestani, okanye iProtestanti?
Iprotestanti yenye yezona zikhulu zamasebe zobuKristu namhlanje ezivela kwinkqubela eyaziwa ngokuba yiProtestant Reformation . Ukuguqulwa kwaqala eYurophu ekuqaleni kwenkulungwane ye-16 ngamaKristu aphikisana neenkolelo ezingekho kwiBhayibhile, izenzo kunye nokusetyenziswa kakubi kwiCawa yamaRoma Katolika .
Ngomqondo obanzi, ubuKristu bokwangoku bunokwahlula kwiintsika ezinkulu ezintathu: amaRoma Katolika , amaProthestani kunye namaOthodoki .
AmaProtestanti akha iqela lesibini elikhulu, malunga nama-800 yezigidi zamaProthestani ehlabathini namhlanje.
Umguquleli ophawulekayo wayengumfundisi waseJamani uMartin Luther (1483-1546) , odla ngokuba nguvulindlela weNguqulelo yamaProthestani. Yena kunye namanye amaninzi anesibindi kunye neengxabano ancedisa ukuvuselela nokuguqula ubuso bobuKristu.
Uninzi lwababhali-mlando lubonakalisa ukuqala kwe-revolution ngo-Oktobha 31, ngo-1517, xa uLuther wabethela i- 95-Thesti yakhe edumileyo kwiYunivesithi yaseWittenburg ibhokisi leNqaba yeChurch Church, iinkokeli zecawa ezinzima ngokusemthethweni ekuthengiseni izipholozo kunye nokuchaza imfundiso yeBhayibhile lokulungiswa ngobabalo kuphela.
Funda kabanzi malunga nabanye abaguquleli bamaProtestanti abakhulu:
UJohn Wycliffe (1324-1384)
UWilliam Tyndale (1494-1536)
UJohn Calvin (1509-1564)
AmaKhristu amaninzi eMbali
Amabandla amaProthestani namhlanje anamakhulu, mhlawumbi amawaka, eenkcubeko kunye neengcambu kwintlangano yeNguquko.
Nangona iicawa ezithile zihluka ngokubanzi kwizenzo nangokholo, isiseko esisemgangathweni sezemfundiso sikhona phakathi kwazo.
Ezi iicawa zonke zichasayo iingcamango zokulandelana kwabapostile kunye negunya lamapapa. Kulo lonke ixesha loKuhlaziya, iinkalo ezi-5 ezahlukileyo zavela kwiinkcaso zamaRoma Katolika za ngaloo mini.
Ziyaziwa ngokuba yi "Solas Five," kwaye zibonakala kwiingcinga ezibalulekileyo phantse zonke iicawa zamaProthestani namhlanje:
I-Sola Scriptura ("Umbhalo wedwa") - IBhayibhile yedwa yimbutho yodwa kwimicimbi yokholo, ubomi kunye nemfundiso.
I-Sola Fide ("ukholo kuphela") - Usindiso lukholo kuYesu Kristu yedwa.
I-Sola Gratia ("ubabalo yedwa") - Usindiso lubabalo lukaThixo yedwa.
USolus Christus ("uKristu yedwa") - Usindiso lufumaneka kuphela kuYesu Kristu ngenxa yesono sakhe sokucamagushela.
USolomon Deo Gloria ("ngenxa yozuko lukaThixo yedwa") - Usindiso lufezwa nguThixo yodwa, kwaye kuphela ngenxa yozuko lwakhe.
Funda kabanzi malunga neenkolelo zeenkonzo ezine ezinkulu zamaProthestani:
Isebe leMethodist lamaProtestanti lilandelela iingcambu zayo ukuya ku-1739 eNgilani kunye neemfundiso zikaJohn Wesley .
Iingoma zokubhikisha ze-Antiwar ze-60s kunye nee-70s
Ndiyathanda! 8 Ibhola leNgcaciso leNqabileyo
Ukucinga: Iingqungquthela zokuLungisa, ukuNgcwazisa, iNkcubeko
I-Explorer Panfilo de Narvaez Ifumene Intlekele eFlorida